Ahoana no Hahaizako Hitsitsy Vola? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Féroïen Ga Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Oromo Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Rosianina Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa
“Nandehandeha tany an-tsena izaho vao haingana, mba hijerijery fotsiny. Nividy zavatra lafo be izaho rehefa tany, nefa izaho tsy nieritreritra ny hividy an’ilay izy akory tamin’ny voalohany.”​—Colin.
Nitsotra i Colin hoe tena tsy mahay mitsitsy vola izy. Hoatr’izany koa ve ianao? Hanampy anao àry ity lahatsoratra ity.
Nahoana no ilaina ny mahay mitsitsy vola?
Ahoana no hanaovana an’izany?
Hevi-diso: Tsy hahavita na inona na inona ianao raha mieritreritra ny hitsitsy vola foana.
Ny tena marina: Vao maika ianao hahavita zavatra be dia be rehefa mahay mitsitsy vola. Hoy ilay boky hoe I’m Broke! The Money Handbook: “Raha hainao tsara ny mitsitsy vola, dia ho azonao daholo izay zavatra tianao, na amin’izao izany na amin’ny hoavy.”
Tadidio izao: Raha mahay mitsitsy vola ianao dia...
Hanam-bola rehefa tena mila an’izany. Hoy ny tanora iray antsoina hoe Inez: “Mba te handeha ho any Amerika Atsimo izaho any aoriana any. Dia sady manangom-bola aho no mieritreritra foana an’izany tanjoko izany.”
Ho kely ny trosanao na tsy hanana trosa mihitsy ianao. Hoy ny Baiboly: “Izay misambo-bola dia mpanompon’ilay mampisambotra.” (Ohabolana 22:7) Hoy ny tovovavy iray antsoina hoe Anna: “Ho simba ny fiainanao raha bokan’ny trosa ianao. Ho afaka hifantoka amin’ny tanjonao kosa ianao raha tsy ananan’olona trosa.”
Ho hita hoe matotra ianao. Ho lasa olon-dehibe matotra ianao, raha izao ianao dia efa mahay mitsitsy vola. Hoy i Jean, 20 taona: “Hoatran’ny fanazaran-tena ilay izy. Amin’izao izaho dia efa miezaka ny hahay hitantam-bola, dia amin’izay izaho ho hoatr’izany foana any aoriana any.”
Tsara ho fantatra: Hoy ilay boky hoe The Complete Guide to Personal Finance: For Teenagers and College Students: “Raha tianao ny hoe tsy hiankina amin’iza na iza, dia tena hanampy anao voalohany indrindra ny mahay mitantam-bola. Tena ilainao mandritra ny androm-piainanao mantsy ny hoe mahay mitantam-bola.”
Fantaro ilay fahazaran-dratsinao. Raha tsy manam-bola foana ianao dia fantaro aloha hoe inona no tena mandany ny volanao. Ilay mividy zavatra amin’ny Internet no mety hahavoa ny olona sasany. Ny hafa indray mety hoe mandany vola tsikelikely dia tsy manana intsony rehefa amin’ny faran’ny volana.
“Mihalany tsikelikely ny volako rehefa mividy zavatra isan’andro aho. Mividy zavatra kely ataoko fanomezana aho, ohatra, na misotro kafe any ivelany, na mividy zavatra misy fihenam-bidy. Gaga aho avy eo rehefa tonga ny faran’ny volana hoe nankaiza daholo ny volako.”​—Hailey.
Manaova teti-bola. Hoy ny Baiboly: “Ahazoan-tombony ny fandaminana mialoha ataon’ny mazoto.” (Ohabolana 21:5) Ho arakao ny vola miditra sy mivoaka aminao raha manao teti-bola ianao. Hanampy anao tsy handany vola be loatra izany.
“Raha mandany vola be loatra ianao, dia diniho tsara hoe lany amin’inona ilay izy. Aza vidina intsony avy eo izay zavatra tsy tena ilainao akory. Ahenao foana ny zavatra vidinao. Farany dia lasa ny vola miditra aminao no betsaka noho ny vola laninao.”​—Danielle.
Aza miovaova hevitra. Fantaro foana hoe inona avy no andanianao vola ary aza mandanilany foana. Be dia be ny hevitra hanampy anao hanao an’izany. Ireto, ohatra, no ataon’ny tanora sasany:
“Tonga dia ataoko any amin’ny banky ny volako, amin’izay izaho tsy tratran’ny fakam-panahy hampiasa an’ilay izy.”​—David.
“Vola kelikely ihany no entiko rehefa miantsena aho. Amin’izay aho mantsy tsy afaka mandanilany vola.”​—Ellen.
“Raha misy zavatra tiako hovidina, dia tsy tonga dia vidiko ilay izy fa miandry elaela aho aloha. Amin’izay ho hitako eo raha tena ilaiko ilay izy na tsia.”​—Jesiah.
“Tsy hoe isaky ny misy fety na misy manasa aho dia mandeha foana. Tsy olana amiko mihitsy ny tsy mandeha rehefa tsy misy vola aho.”​—Jennifer.
Tsara ho fantatra: Tena zava-dehibe ny hoe mahay mitantam-bola. Manomboka mahatsapa an’izany i Colin, ilay niteny an’ilay teny erỳ ambony. Hoy izy: “Izaho no ho loham-pianakaviana indray andro any, nefa ahoana raha mandanilany vola aho? Raha izaho mbola tsy manambady izao aza tsy mahay mitantam-bola, koa mainka fa rehefa manambady!”
Soso-kevitra: “Resaho amin’ny olona anankiray hoe te hitsitsy vola ianao, dia asaivo manontany anao matetika izy hoe nahavita an’ilay izy ve ianao. Amin’izay ianao tsy halaim-panahy handanilany foana ny volanao.”—Vanessa.
“Tena ratsy be izany hoe bokan’ny trosa izany. Efa nahazo ahy indray mandeha mantsy izany, dia tsy te hiherika an’izany intsony aho. Lasa afaka manao izay tiako kosa aho, rehefa tsy ananan’olona trosa, sady milamin-tsaina kokoa.”—Julie.
“Matetika ny mpivarotra sy ny mpanao dokam-barotra no mahatonga anao hieritreritra hoe tsy maintsy mividy an’ilay izy izao dia izao ianao fa tsy tokony hiandriandry izany. Tokony hieritreritra tsara foana anefa ianao. Raha tsy manao an’izany ianao, dia mety hidika izany hoe tsy tokony hividy an’ilay izy.”—Jesiah.
Inona no atao raha te hanangom-bola sy hitsitsy? Ato misy torohevitra.
Hizara Hizara Ahoana no Hahaizako Hitsitsy Vola?
ijwyp no. 72